Tranonkala mbola loharanom-bola azo tratrarina | Martech Zone
Alakamisy, Septambra 19, 2013 Alarobia, Desambra 17, 2014 Larry Alton
Raha mino ny zavatra rehetra vakianao ianao, dia very maina ny fananganana tranokala ahazoana vola miditra tsimoramora tato ho ato. Ireo izay nanamarina ny fanamarinam-pahafatesana dia manome tsiny ny fifaninanana goavana sy ny fanavaozana an'i Google ho antony tsy ahazoana vola intsony ny fidiram-bola mahazatra.
Na izany aza, toa tsy ny olona rehetra no nahazo ilay memo. Raha ny marina dia mbola betsaka ny olona ao amin'ny tranonkala no mahazo vola kely na dia vola aza mandalo avy amin'ny tranonkalany.
Ahoana no fomba ahazoana vola miditra amin'ny Internet amin'ny Internet
Investopedia dia mamaritra ny fidiram-bola mandalo tahaka ilay hoe "azon'ny olona iray avy amin'ny orinasa iray izay tsy andraisany anjara mavitrika."
Ny fananana tranonkala dia nanjary loharanom-bola marim-pototra ho an'ny maro izay afaka namorona pejy vitsivitsy amin'ny atiny izay avo lenta amin'ny Google na ny motera fikarohana hafa. Miantehitra amin'izany, ny tompona tranonkala dia hampiroborobo ny vokatra ho mpiara-miasa aminy; mahazo vola ho an'ny mpanjifa tsirairay alefan'izy ireo amin'ny tranonkala ifandraisany. Ny tompon'ilay tranokala dia tokony hanavao ny sasany indraindray afa-po, manamboara rohy backlinks vitsivitsy na mankanesa amina bilaogy bilaogy vahiny fa hafa noho izany ny antenaina dia ny hampandehanana ny tranokala tsy misy fidirana an-tsehatra betsaka ary hamokatra tombony mahasalama.
Niova anefa ny fotoana. Ny fanavaozana algorithm an'i Google dia nahatonga ny rafitry ny backlink tsy voajanahary izay tranokala mpandoa vola be dia be no miaina amin'ny sazy amin'ny laharan'ny fikarohana. Rohy sy dokam-barotra afangaro marobe koa no nahatonga ny sasany tamin'ireo tranokala ireo ho very toerana teo an-tampon'ny valiny. Raha tsy misy laharana ambony dia maina ny vola miditra amin'ireo tranonkala ireo.
Saingy, tsy hoe rehefa maty ny saha dia maodely iray amin'ny fidiram-bola tsy mandalo intsony. Raha ny marina dia mbola misy fomba maro anaon'ireo tranonkala mamokatra vokatra lehibe amin'ny endrika fidiram-bola tsy misy valiny.
Ny fanaovana ny tranokala hiasa amin'ny 2013
Ao amin'ny 2012, Ny magazine Forbes dia nihazakazaka iray sanganasa mitondra ny lohateny hoe, “Ny antony 4 lehibe mahatonga ny 'fidiram-bola pasif' dia nofinofy mampidi-doza.” Nanazava izy ireo tao fa tsy misy tranokala afaka misambotra sy mitazona ny mpanjifa am-pahalalana. Misy hatrany ny asa tokony hatao mba hijanonana mialoha ny fifaninanana. Na dia marina aza izany, ny hevitra ao ambadiky ny fidiram-bola mandalo dia mety mbola ho mpanam-bola lehibe - raha manome fampahalalana tadiavin'ny olona ny tranokalanao, dia afaka mahazo tombony ianao. Izay no ampahany tsy azo avela, saingy tsy maintsy mivarotra sy mampifanaraka an'io atiny io ny olona.
Tamin'ny taona 1999, Tim Sykes, mpamatsy vola fanta-daza, dia nahatratra $ 2 tapitrisa dolara isan'andro ny varotra ariary teo anelanelan'ny kilasy tao amin'ny University of Tulane. Amin'izao fotoana izao dia mandray ny paikady nahatonga azy hahazo izany vola izany izy ary namadika izany ho kilasy fananganana harena natolotra an-tserasera. Mifandray amin'ny mpianany izy, ary mivarotra ny vokariny nefa ny atin'ny fampianarana tsy zavatra mitaky fanovana lehibe.
Ny fampianarana fahaiza-manao sarobidy, na farafaharatsiny tadiavina, dia fomba iray hanovana ny tranokala ho loharanom-bola.
Ny gazety dia fomba iray hafa ahazoan'ny tranokala fidiram-bola betsaka fidiram-bola. Tsy amin'ny alàlan'ny saram-pisoratana anarana, fa amin'ny alàlan'ny marketing marketing.
Ny fananganana lisitra be olona liana dia mety hanodina tombony hajaina. Saingy ny fananganana an'io lisitra io dia manomboka amin'ny fahazoana ny fahatokisan'ny mpitsidika tranokala iray. Rehefa miandry fatratra ny fampahalalana bebe kokoa izy ireo dia avo kokoa ny mety hisoratra anarana handray newsletter. Ny newsletter, raha misy atiny sarobidy, dia azo ampiasaina hivarotra vokatra amin'ny alàlan'ny marketing marketing.
Raiso CopyBlogger.com, ohatra. Mpitoraka bilaogy marobe no manaraka ity tranonkala ity raha mila fanazavana momba ny fomba fanatsarana ny bilaogin'izy ireo, ary ny tsirairay izay misoratra anarana handefa mailaka avy amin'izy ireo dia ampidirina amina tolotra izay hanampy amin'ny fitadiavam-bola ilay tranokala.
Toy izany koa no azo lazaina amin'ny podcast, bilaogy na karazana media Internet hafa. Raha mbola malaza ny fampahalalana ary manampy ny olona hamaha olana dia mety hahasoa ny roa tonta izany.
Ny tranokala dia mety ho loharanom-bola tsara raha manome lanja ny mpampiasa amin'ny fomba sasany na amin'ny fomba hafa. Ny tetika taloha amin'ny fanangonana pejy vitsivitsy manan-katao teny Anglisy mba hakana fifamoivoizana maty, saingy tsy zavatra ratsy tanteraka izany. Ny tabataba sy korontana aterak'ireny karazana tranonkala ireny dia tsy naka afa-tsy ireo tranonkala manolotra zavatra azon'ny mpitsidika ampiasaina.
Ny lakilen'ny fahombiazana dia ny fanomezana zavatra ilain'ny olona. Hisy hatrany ny vola azo amin'ny Internet rehefa ampiharina amin'ny fomba mandaitra ity fotokevitra tsotra ity.
Tags: fanaovana vola an-tseraseramarketing an-tseraseravola miditramarketing web
UserVoice: Simple, feedback, fangatahana endri-javatra ary ny fanarahan-dia ny Bug.
Sep 19, 2013 ao amin'ny 8: PM PM
Mieritreritra aho fa raha miditra amin'ny alàlan'ny fidiram-bola an-tsokosoko amin'ny alàlan'ny tranokala iray isika, dia tokony hampiasa fotoana, loharano ary paikady forcast hitazomana isika. Miteraha atiny mahasoa, manaova vola ho azy ary manangana fiarahamonina. Google sy ny motera fikarohana hafa dia tia buzz sy hetsika ao anaty tranonkala iray.
Sep 20, 2013 amin'ny 7: 10 AM
Miombon-kevitra aminao aho Larry! Raha te hanana fahombiazana ny orinasanao dia ilaina ny manana tranokala voaomana tsara hivarotra an-tserasera. Na orinasa kely sy eo an-toerana aza dia mila tranokala tsara hanatsarana ny fahitana sy ny vokatra vokarin'ny orinasan'izy ireo.